Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay qaraxii lala beegsaday banaan bixii Addis Ababa. – Xeernews24
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay qaraxii lala beegsaday banaan bixii Addis Ababa.
23. Juni 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka hadlay qarax bambaano oo lala beegsaday banaan bax ka socday Fagaaraha Meskel Square ee magaalada Addis Ababa, isagoo si kulul u cambaareeyay falkaas.
Mr Abiy Ahmed ayaa qaraxa kaddib si toos uga hadlayay Telefishinka dowladda ee EBC, isagoo sheegay in weerarkaas uu ahaa isku day aan lagu guuleysan oo ay ka dambeeyeen kooxo aan dooneyn inay arkaan Midnimada Itoobiya.
Waxaa uu sheegay in tiro dad ah oo lagua sheegey ilaa 6 qof ay ku dhinteen qaraxa, halka kuwa kalena oo lagu qiyaasay ilaa 100 qof ay ku dhaawacmeen waxaa uu shacabka dalkiisa ugu baaqay inay u midoobaan.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si degdeg ah loogala cararay goobta, kaddib markii uu qaraxa dhacay, waxaana goobta ka dhacay is buurasho.
Ka hor inta aanu qaraxa dhicin Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa ku dhex jiray markii uu khudbeynayay muraayad u muuqatay kuwo aan xabada karin.
Sawirro ay baahiyeen warbaahinta maxaliga Itoobiya ayaa muujinayay goobta qaraxa oo dhiig iyo burbur ka muuqday, sidoo kale dad dhowr ah ayaa jiifay, waxaana gawaarida gurmadka degdega ay daabulayeen dhaawacyada
Laamaha ammaanka Itoobiya ayaa weli ka hadlin arrintan, sidoo kale si rasmi ah looma oga inta uu gaadhsiisan yahay khasaaraha.
Kumanaanka isugu soo baxay banaan baxa fagaaraha Meskel Square ayaa taageerayay qorshaha is bedelka uu waday Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/Abiye.jpg 478 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-23 11:37:522018-06-23 11:37:52Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay qaraxii lala beegsaday banaan bixii Addis Ababa.
R/wasaaraha Itoobiya oo si deg deg ah uga hadlay Qaraxa lala Beegsaday. Daawo:Qaabka RW Abiy Ahmed loogala cararay goobta qaraxa kadhacay iyo goobta...